Qaramada Midoobay oo Ku Celisay in Somalia ay ka jirto xaalad Biniaadan-nimo – Radio Daljir
Agoosto 31, 2015 7:42 b 0
Isniin, Ogoosto 31, 2015 (Daljir) — Qaramada Midoobay ayaa shaacisay inay weli ka jirto Soomaaliya xalaad bani’aadamnimo oo khatar ah, kaddib abaarihii afar sannadood ka hor ku dhuftay Somalia, iyadoo xustay inay jiraan dad badan oo u baahan gargaar deg-deg ah.
“Heerka Cunto-yaraanta iyo Nafaqo-darrada Somalia weli waa mid khatar ah. Hay’adaha Gargaarka iyo dalalka Deeq-bixiyeyaasha ayaa waxaa ka hor-joogsaday inay xaaladda wax ka qabtaan dagaallada ka socda qaybo ka mid ah dalka,” ayuu Mas\_’uulka QM u Qaabilsan Gargaarka bani’aadamnimo ee Somalia, Peter de Clercq. Isagoo intaas ku daray. “Xaaladda dadka ku barakacay gudaha Somalia ayaa ah mid walaac gaar ah leh.”
Sidoo kale, Clercq ayaa intaas ku daray in tirada dadka u baahan gargaarka ay kor u kacday 17% marka loo eego lixdii bilood ee lasoo dhaafay, taasoo ah mid u dhiganta 731,000 Qof illaa 855,000 oo qof; sida lagu xusay warbixin ay soo saartay maanta hay’adda FSNAU.
Hay’adda FSNAU ayaa intaas ku dartay in roob yaraani ay sababtay inay beeraha kasoo go’i waayaan miro fiican, taasina ay sababtay in 251,000 oo carruur ah ay lasoo daristay nafaqo-darro – kuwaasoo 40,000 oo ka mid ah ay qarka u saaran yihiin xaalado nololeed oo khatar ah iyo dhimasho.
Qaramada Midoobay ayaa Warbixinteeda ku Xustay in Xaaladda Bani’aadamnimo ay Weli walaac badan leedahay, iyadoo xustay in sannadkii 2011-kii ay abaartii ka dhacday Somalia u dhinteen in ka badan 250,000 oo qof.
“Inkastoo wax badan laga qabtay xaaladaha bani’aadamnimo ee Soomaaliya ayaa Haddana waxaa jirta in dad ku dhow 3-milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo oo deg-dega ah,” ayaa mar kale lagu yiri warbixinta QM ay soo saartay maanta.
Warbixinta ayaa lagu Xusay in Murannada Siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Dowladda Soomaaliya ay sii Adkeeyeen Khatartaha dhanka Bani’aadamnimada ah eek a jira Somalia; iyagoo xustay inay khatar taha yin wax lag aqabto xaaladda jirta.